Zvizorwa bhodhoro fekitari - China zvizorwa bhodhoro vagadziri, bhizimisi
100ml Zvizoro zvekufamba zvine mabhodhoro
Akanaka machira Midziyo yezvizoro
Environmental Empty Refillable zvizorwa Cream chirongo Storage Bottle Container Bottle
Yakakwana pakuenzanisa kana kuchengetedza mimvuri yeziso, zvigadzirwa, mafuta uye zvimwe zvekuzora.
Kuiswa chisimbiso kwakanaka, chengetedzo uye mhando mhando.
100ml Kirimu inotonhorera yakabhoderedzwa zvakasiyana
Yakakwana yezvizoro, mafuta, mapoda, uye mafuta.
Zvivharo zvine yakanaka, yakasarudzika, inoyevedza sirivha denderedzwa.
Yakagadzirwa nechikafu giredhi polypropylene plastiki (BPA-Mahara)
Yakakwana pakufamba, uye zvinokwana muhomwe yako.
Yakatenderedzwa girazi rakakosha mafuta bhodhoro 10 ml 20 ml 30 ml 50 ml
Ichi chigadzirwa chinotsigira: silika skrini, kupisa kutsika, chando, kupuruzira, iko pamusoro kugadzirisa kunoda kuti mutengi ape chinyorwa chekunyora, nguva yekuendesa mazuva manomwe kusvika gumi, zvikanganiso zvidiki, kusiyana kwemavara, nezvimwe hazvigone kudzivirirwa, ndapota nyorera mutengi sevhisi yezve ruzivo
Girazi yezvizorwa bhodhoro mafuta bhodhoro 20 ml 30 ml 50 ml 100 ml 100 ml
Dhinda / Spray Sarudzo yakanaka yemusha, maviri mapepanhau maheti anowanikwa.
Iyo yakasvibira inotungamira-isina girazi zvinhu inoita kuti zvive nyore kushandisa.
50ml Square epurasitiki inovhara mukaka wakasvinwa unogona kuvharirwa zvakasiyana
【YAKakwira-HUNHU】 Yakagadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu, inogara yakasimba uye inotakurika, yakachengeteka uye ine hutano, inoshanduka uye haina kureruka, kuchengetedza nzvimbo, kushandiswazve, nyore kushandisa nekuisa.
【YEMAHARA DZIDZO size Saizi yakakwana inoita kuti ive inokodzera nzvimbo yakatetepa kana kona kona. Inogona kugadzirisa zvinhu zvako zvemvura kuitira nyore kuchengetedza uye kushandisa uye chengeta imba yako yakachena uye yakatsvinda.
KUSHANDISWA KWAVERSATILE uit Inokodzera pefiyumu, mishonga inouraya utachiona, mushonga, doro nezvimwe zvinhu zvemvura. Kubudirira kugovera zvinwiwa zvekumisikidza uye zviri nyore kushandisa.
【ZVINOFAMBIRA UYE ZVINOGONESESA is Inokodzera saizi uye nyore kutakura. Inogona kushandiswa panzendo dzekunze dzekuchengetedza nekuchengetedza zvinhu zvemvura zvaunoda kutakura.
50ml Mukaka unofamba uri mumabhodhoro
50ml Bvisa mukaka wakaenzana wakaiswa mumabhodhoro zvakasiyana
100ml Govanisa ruomba mumabhodhoro
10-15ml Govanisa kirimu mumabhodhoro
150ml Mvura nemukaka zvakaiswa mumabhodhoro zvakasiyana
25 ~ 50ml Ganda rekuchengetedza zvigadzirwa zvakaiswa mumabhodhoro zvakasiyana
500ml Bvisa girazi bhodhoro remaoko sanitizer